Nanaiky tsy tamim-pisalasalana noho ny fiaraha-miasa. Niatrika ny famotorana niainga tany amin’ny polisy sy ny fampanoavana, hoy ny Mpisolovava Willy Razafinjatovo na Olala. Nisy fianakaviana nilaza fa hampidirina ny mpisolovava avy amin’ny TIM izay any Toamasina. Efatra anefa ireo mpisolovava ny ao anatin’ny kabinetra misy an’i Olala, izay ho 5 miaraka amin’ity mpisolovavan’ny TIM. Tsy nandà izany izy ireo. Efa niantsoroka ny dosie hatrany am-boalohany, araka ny fanazavana. Nanapa-kevitra hiala anefa ireto mpisolovava ireto, raha ny fanambaran’ny Maitre Olala, noho ny fahatsapana fampidirana loko ao anatin'ny raharaha; tsy manaiky fandokoana politika ny asan’ny mpisolovava izaho sy ny kabinetra misy ahy hoy ny Maitre Willy razafinjatovo na Olala. Na izany aza, nilaza izy fa efa mahatoky ny fahafahan’i Arphine Rahelisoa izy sy ny ekipany taorian’ny ezaka nataon’izy ireo na nisafidy ny hiala an-daharana amin’ny fiarovana aza.